Waxa uu noqonayaa mid caadi ah oo u dhexeeya music jecel users computer waa maktabadda music kharriban. Nadiifinta iyo abaabulka maktabadda music gacanta noqon karaa geedi socod daal iyo waqti lumis, marka aad leedahay ururinta weyn ee audio iyo video files. Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, waxaa jira codsiyo badan oo software la heli karo si aad samatabbixinta ilaa nadiif ah oo aad habayso ururinta music weyn in si ka fiican. Maqaalkani waxa uu ka hadlayaa sidii loo abaabuli lahaa maktabada music aad u Lugood, Windows iyo Mac.
Part I: Sida loo nadiifiyo Lugood music maktabadda - Wondershare TunesGo
Qaybta II: Sida loo nadiifiyo maktabadda music Lugood ee Windows
Qaybta III: Sida loo nadiifiyo maktabadda music Lugood ee Mac OS X
Part I: Sida loo nadiifiyo maktabadda music Lugood - TunesGo Wondershare
TunesGo by Wondershare waa software ah oo la sameeyey si loo yareeyo xanuunka abaabulka iyo nadiifinta maktabadda Lugood weyn. Codsiga waxaa loo heli karaa dhammaan qalabka Apple. Waxa uu ka kooban qalabka macruufka aad loo maarayn karo hab-abbuurka ah oo hufan oo isticmaalaya codsigan. Qeybta ugu wanaagsan waa in ku dhiirigelinayaan in uu si joogto ah u cusboonaynta software ee ka shaqeynayaan si wanaagsan oo sifaatka aad u sareeya.
Interface in Wondershare TunesGo uu leeyahay waa uncluttered, dareen leh, fududeeyey oo qalooca yaacday waxbarashada in ay ka dhigaa si sahlan loo isticmaalo bilowga ah iyada oo aan. Ayaad ugu xiri karto aaladaha Apple iyo wareejiyo xogta ka mid ba midka kale oo aan si loo badbaadiyo macluumaadka ku saabsan drive deegaanka adag ee aad PC.
Waxa intaa dheer in, Wondershare TunesGo kuu ogolaanaysaa inaad ku eegaan files warbaahinta ka hor inta dhoofinta ama soo degida ay ciyaaryahanka music sare dhisay-in. Haddii ay dhacdo in aadan haysan gurmad Lugood ah, tani waa codsi waa-leeyihiin sidii loo soo celin warbaahinta ka qalab macruufka ah si aadan u lumin xog muhiim ah ku kaydsan waxa ku jira.
Si aad u billowdo nadiifinta iyo kulug maktabadda music Lugood, download TunesGo Wondershare aad Mac PC. Ka dib markii la rakibey, raaci doonaa habraaca ku siiyo si taxadar:
Burcad TunesGo Wondershare aad kombuutarka iyo riix Switch in Lugood koronto-in icon dhankiisii ​​top-saxda ah ee interface ka.
Sida ugu dhakhsaha badan TunesGo iyo Lugood waa la wada synched, riix Music doorasho hoos Library category ka Murayaad bidix ee interface ka.
Ka dib markii tareenka ee maktabadda waxaa lagu soo bandhigaa in ay leeg- saxda ah, guji Maamul Music Library doorasho ka Wondershare TunesGo guddi ee xaq.
Laga soo bilaabo fursadaha ballaadhiyey, guji CleanUpiTunes Library .
Laga soo bilaabo kale ganaax-ka qabi karto fursadaha balaariyay in muuqan socda tilmaamaya dhibaatooyinka ay suurtagal tahay in aad maktabadda, dooro mid ka mid ah wakiil ka dhibaatada in aad rabto in aad si uu u xaliyo. (The songs nuqul doorasho la doorto waxaan ku hadlay tusidda this.)
Marka uu furmo suuqa soo socda soo, dooro wadada (s) oo u baahan ganaax-ka qabi karto.
Fine-habayn gaadmada ah ee sida aad looga baahan yahay.
Save isbedelada adigoo riixaya Save button ka dhinaca kore ee midig ee suuqa. Fiiro gaar ah : Haddii aad rabto in aad tirtirto badan files nuqul, xulo dhammaan faylasha loo baahnayn iyo riix Clear All button ka geeska top-saxda ah ee suuqa kala.
Marka sameeyo, waxaad bilaabi kartaa adiga oo isticmaalaya maktabad cusub qaboobay iyo nadiifiyo-up aan dhibaatooyinka hore.
TuneUp Media waa mid ka mid ah codsiyada fur-in ugu fiican marka ay timaado abaabulka iyo nadiifinta ururinta music aad. Software waxaa laga heli karaa labada qalabka Windows iyo macruufka. Haddii aad tahay user Windows ah, waxaad kala soo bixi kartaa codsiga ka link siiyey: https://www.tuneupmedia.com/download/windows
TuneUp Media waa aalad awood ah oo hufan si ay u nadiifiyaan maqan ama dhaawac tags iyo saaro kuwan raadkaygay nuqul ka ururinta music aad. Si loo ay Suite qalabka urur iyo nadiifinta, warbaahinta TuneUp sidoo kale yimaado oo la feature a smart loo yaqaan 'Tuniverse' in aad u digaa ku saabsan dhacdooyinka riwaayad deegaanka ah fanaaniinta aad ugu jeceshahay. The feature 'DeDuper' horumarsan kuu ogolaanaya in aad tirto faylasha nuqul in jiffy ah.
Si aad u nadiifisid maktabadda music adiga oo isticmaalaya TuneUp Media:
Download iyo rakibi TuneUp Media kombiyuutarka aad desktop ama PC laptop. Fiiro gaar ah : Marka aad buuxiso habka rakibo, codsiga si toos ah isku aad Windows Media Player iyo sidoo kale isku xira in TuneUp server internetka. Marka aad abuurtaan TuneUp Media, interface furay ayaa afar fursadaha la heli karo kala ah:
a. nadiifi (nadiifinta ururinta music aad)
b. Cover Art (buuxiyo fanka cover maqan)
d. Tuniverse .
Si aad u nadiifiso maktabadda, u furan Windows Media Player iyo xaq-riix track la doonayo (s) ka furmo suuqa soo bandhigay.
Laga soo bilaabo menu macnaha guud oo la soo bandhigay, dooro soo dir> La soco Up doorasho.
Sida aad sidaas samayso, track ee la doortay (s) / album (s) waxaa lagu wareejiyey TuneUp suuqa kala halkaas oo baaritaan barnaamijka wararka ugu tag ka database online ah.
Marka TuneUp Media dhameystiray geedi socodkeeda, waxaad riixi kartaa All Save ama Clear All doorasho ka dhinaca kore ee midig ee suuqa si loo badbaadiyo isbedel ama faylka (s) ka qaad siday u kala horreeyaan.
Inkastoo Mac OS X ayaa codsiyada software yar oo samayn kara legwork ee nadiifinta maktabadda music aad, in micnaheedu ma aha in aad leedahay si ay u degaan u Lugood. Mid ka mid ah software ugu wanaagsan ee la heli karo Mac OS waa MusicBrainz Picard.
MusicBrainz Picard waa jiilka xiga cross-madal (diyaar u ah Mac OS, Windows, iyo Linux) music by qabanqaabiyaha MusicBrainz. Software waxa ku qoran Python oo ah Af-barnaamijyada sare.
Waxaad Piccard ka link siiyey bixi kartaa: https://picard.musicbrainz.org/downloads/
Version ugu dambaysay ee Picard diiradda saarayaa tagging album-u janjeedha oo waafaqsan cross-madal. Habkan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka faa'iidaysan database MusicBrainz ka girgirka. Waxa uu beddelay 'Classic' tagger hore in ka shaqeeyeen hab-track u janjeedha. Iyadoo Picard, waxaad ku haboon nadiifin kartaa maktabadda music weyn iyo unorganized fudayd. Si aad u isticmaasho MusicBrainz Picard nadiifinta maktabadda music aad:
Codsiga Download ka link kor ku siiyey oo ku xidh aad kombuutarka. Fiiro gaar ah : Ka hor inta aan dacwad, waxaad u baahan tahay inaad nuqul ka tareenka maktabadda Lugood si aad u gal gaar ah oo cusub on your computer.
Marka sameeyo, u furan MusicBrainz Picard.
Guji ka Folder Add button ka sareysa.
Laga soo furay raadso Directory sanduuqa, hel folder Desktop ah, iyo jiidi files ka gal oo cusub ku desktop in column ka tagay on qaybta sare ee daaqadda.
Sida ugu dhakhsaha badan tareenka ayaa lagu soo guuriyeen, oo Picard iyaga bandhigayaa hoos liiska la ekaan Files khaanadda ka hadhay qaybta sare ee daaqadda, dooro ekaan doorasho weyn ee Files, oo guji badhanka fiiri ka toolbar caadiga ah ugu sareysa.
Fiiro gaar ah : Sida aad sidaas samayso, MusicBrainz Picard baadhaa wixii macluumaad ah ee files ee database MusicBrainz ah. Marka macluumaadka la soo ururiyey, files waxaa markaas kala sooco sida albums ay, oo waxaa lagu soo bandhigaa khaanadda saxda ah ee qaybta sare ee daaqadda. Fiiro gaar ah : The kuwan raadkaygay ku soo bandhigay bilow ah note icon muusikada. Marka kuwan raadkaygay ku noqoto la xiriira file, ay bedesho mid ka mid ah kuwan soo socda: • A laydi yar oo cas ayaa muujinaya ciyaar xun ka database halka laydi ah oo doog ah ayaa muujinaya ciyaar lagu qanci karo. • laydi A cas oo ka dhigan tahay in Picard ayaa la kulmey khalad ah. • A Calaamad cagaar ah ayaa muujinaya in track waa kor-u-taariikhda iyo badbaadiyey.
Waxaad ka arki kartaa oo is barbar macluumaad tag adigoo siyoodba magaca wadada, iyo maraya Macluumaadka iyo macluumaad Cusub oo ka soo baxa qaybta hoose ee suuqa kala.
Marka aad ku qanacsan tahay oo dhan metadata ka saxar ah, xaq-riix icon Album ah (sida u muuqata Compact Disk ah ee soo socota si ay magaca heestii), oo guji doorasho Save ka menu macnaha guud.
Si aad u tirtirto faylasha nuqul, waxaad riixi kartaa file ah (s) ayaa muujiyey in casaan iyo riix badhanka saar ka toolbar caadiga ah ugu sareysa.
> Resource > Lugood > Sida loo Nadaafadda Music Library